NGWERE AGBAALA AJỊ! ONYE ISI ỤKA CHỌRỌ KA-EWERE ỤLỌ ỤKA MERE ỤLỌ OKPUKERE NDI ALAKUBA – hoo!haa!!
Otu onye rụburu ọrụ dịka onye isi, (pastor), n’ụlọ ụka Assemblies Of God), nke Naijiriya ma jiri aka ya mee onwe ya onye isi oche otu ọ kpọrọ Northern Christian Association of Nigeria, bụ Rev. Yakubu Pam akpọkuela aka na-achị steeti Kaduna bụ Mallam Nasir El-Rufai ka o were ụlọ ụka dịgasị na steeti Kaduna mere ụlọ okpukpere ndi ụka Alakụba.
Rev. Pam bụ onye nke achụrụ achụ n’ụlọ ụka ndi Assemblies Of God maka ụdị akparama agwụ eyighị nke ndi otu Kraist ọ na-akpa, ka anyị nụrụ na ọ na-etibu kepu kepu ibido ụka nke ọ chọrọ ịkpọ Northern Assemblies Of God Independent.
Akụkọ kwukwara na nwa amadi a bụ Rev. Pam edepurularị ọtụtụ ndi aka na-achị steeti dị na mgbago ugwu ala anyị akwụkwọ ozi iji gwa ha mkpa ọdị na ha tụgharịrị ụlọ ụka ndi otu Kraist niile dị na mgbago ugwu ala anyị, ka ha ghọọ ebe okpukpere ndi Alakuba.
Pam bụ onye nke achọpụtaworo na Mụọ-nsọ ahapụwo, ka-ekwuru na-ọ na-achọzị ụzọ ọ ga-esi tinye nkewa n’ụlọ ụka ndi Assemblies Of God nke Naijiriya n’akụkụ mgbago ugwy ala anyị.
Ọbụ ihe itụ n’anya ma na-echukwa ụra na onye kpọrọ onwe ya onye isi ụka nke ndi Pentikọs (Pentecostal Pastor), ga-ezigara aka na-achị steeti ọbụla akwụkwọ ozi maka iwere ihe Pịta kwụọ Pọl ugwọ site na-ịsị ya were ụlọ ụka ndi otu Kraist mere nke ndi Alakụba.
Previous Post: EGWU DỊ N’ABUJA!!!
Next Post: ENWERE IKE AGAGHỊ AKWỤGBU EMEKA EZEUGO